Geedaha sirdoonka ee Siberia | December 2019
Ugu Weyn Ee Geedaha sirdoonka ee Siberia
Noocyada ugu wanaagsan ee geedaha tufaaxa ee Siberia
Inkastoo xaqiiqda ah in geedka tufaaxu uusan aheyn geed gaaban oo caadi ah, waxay u muuqatay gobolka Siberian oo aan waqti dheer ka hor. Sababta tani waa xaaladaha cimilada xun. Si kastaba ha ahaatee, in ka badan labaatan noocyo jiilaal-adag ah oo loogu talagalay Siberia ayaa la baddalay maanta. Wixii aan kuu sheegi doono maanta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedaha sirdoonka ee Siberia 2019